Oraahda Peter Lynch: 17ka ugu fiican, waa kuma Peter Lynch iyo sida uu u maalgashado | Dhaqaalaha
Markaan dooneyno inaan baranno ama aan bilowno maaddo aanan waligeen taabanin ama aad u yar, waxa ugu badan ee lagula talin karaa waa inaan is ogeysiino, wax ka baranno oo aan eegno dadka caanka ka ah goobtaas. Adduunyada dhaqaalaha waa isku mid. Maalgashadayaasha iyo dhaqaaleyahanada waaweyn waxay hayaan talo badan oo ay noosoo gudbiyaan, sidaa darteed waligood dhib malahan in la aqriyo xikmadooda, sida weedhaha Peter Lynch.
Dhaqaalaha waa kuwo aad u dhib badan oo qatar ah markay tahay maalgashiga. Taas awgeed waa inaan si fiican u qoynaa inta aan awoodno ka hor intaanan lacagteenna soo bandhigin adoon ogeyn waxaan sameyneyno. Sababtaas awgeed waxaan u hibeynay qodobkan weedhaha Peter Lynch. Intaas waxaa sii dheer, waxaan wax yar ka hadli doonnaa cidda uu yahay dhaqaaleyahankan caanka ah iyo falsafadiisa maalgashi.
1 17-ka weedhood ee ugu wanaagsan Peter Lynch
2 Waa kuma Peter Lynch?
2.1 Sidee Peter Lynch u maal gashaa?
17-ka weedhood ee ugu wanaagsan Peter Lynch
Waa in la fishaa, inta lagu gudajiray sannado badan oo uu ku shaqeynayay adduunka dhaqaalaha, Peter Lynch wuxuu ururiyey weedho tiro badan oo Waxay u noqon karaan hage dhammaan kuwa go'aansada inay ka bilaabaan suuqyada caalamiga ah. Marka xigta waxaan arki doonaa liiska 17-ka weedhood ee ugu wanaagsan Peter Lynch:
"Furaha in lacag laga helo saamiyada ma ahan in laga cabsado."
"Waad waayi kartaa lacag muddada gaaban, laakiin waxaad u baahan tahay muddada dheer si aad lacag u hesho."
“Waa muhiim in la barto inay jirto shirkad ka dambaysa saamiyaal kasta, waxaana jira oo keliya hal sabab oo dhab ah oo kaydku kor ugu sii kacayo. Shirkaduhu waxay uga gudbaan waxqabad xumo una gudbaan mid wanaagsan, ama kuwa yaryari weynaadaan oo weynaadaan. "
"Haddii aadan falanqeynin shirkadaha, waxaad leedahay fursado isku mid ah oo aad ku guuleysan karto sida ciyaaryahan turub ah oo u sharxaya adigoon eegin kaararka.
Maalgashiga waa farshaxan, maahan cilmi. Dadka u janjeera in ay si adag u tirakoobaan wax kasta ayaa ku jira khasaaro. "
Weligaa ha maalgalin fikrad aadan qalin ku sharixi karin.
"Shirkadda ugu fiican ee la iibsan karo waxay noqon kartaa mid aad horay ugu haysatay faylalkaaga."
Marka laga reebo kiisaska layaabka weyn, ficillada waa kuwo aad loo saadaalin karo muddooyinka labaatanka sano ah. Haddii ay baxayaan ama ay hoos u dhacayaan labada ama saddexda sano ee soo socota, waxay la mid tahay rogidda lacagta birta ah.
“Haddii aad in ka badan saddex iyo toban daqiiqo ku qaadatay ka wada hadalka saadaasha dhaqaalaha iyo suuqa, waxaad lumisay toban daqiiqo.
"Haddii aad jeceshahay dukaanka, waxaad u badan tahay inaad jeceshahay ficilka."
Maalgeli waxyaabaha aad fahanto.
Weligaa ha maal gashan shirkad adiga oo aan marka hore ogeyn xisaabteeda maaliyadeed. "
Muddada fog, isku xirnaanta ka dhaxaysa guusha shaqo ee shirkadda iyo guusha ay ka gaadhay suuqa saamiyada waa 100%. Farqigaas ayaa fure u ah lacag sameynta. "
"Haddii guddiga uu iibsanayo saamiyada shirkaddiisa, waa inaad sidaas oo kale sameysaa."
Maalgashiga oo dhami isku mid ma aha.
"Maalgeli saamiyada ka hor hanti kale."
Ma arki kartid mustaqbalka adoo isticmaalaya muraayadda muuqaalka gadaal. "
Waa kuma Peter Lynch?
Si aynu si fiican u fahamno weedhaha Peter Lynch, waa inaan ogaanno cidda uu yahay dhaqaaleyahankan weyn iyo falsafadiisa maalgashi. Xilligan waa mid kamid ah aqoonyahanada ugu aqoonsan uguna qiimaha badan xirfadaha aduunka oo dhan. Wuxuu mas'uul ka yahay sanduuqa Fidelity Magellan, oo u muuqda inuu helay soo celin sanadle ah oo ah 29% inta lagu gudajiray sanadihii 1977 ilaa 1990, guud ahaan 23 sano. Sababtaas awgeed, Lynch waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah maareeyayaasha sanduuqa ugu guulaha badan taariikhda oo dhan. Intaa waxaa dheer, waa qoraaga qoraalo dhowr ah iyo buugaag ka hadlaya istiraatiijiyado maalgashi iyo suuqyo.
Sidee Peter Lynch u maal gashaa?
Mabda'a maalgashiga Peter Lynch ugu caansan waa aqoonta maxalliga ah, taas oo ah, maalgelinta waxa la og yahay. Maaddaama dadka badankood ay u muuqdaan inay ku takhasusaan dhowr meelood oo gaar ah, adeegsiga fikradan aasaasiga ah waxay ka caawineysaa maalgashadayaasha inay helaan saamiyada wanaagsan iyo kuwa la qiimeeyay. Fikradaha uu iftiimiyay dhaqaaleyahankan weyn ayaa ah Maalgeli shirkadaha leh deyn yar, oo faa'iidooyinkoodu ku jiraan marxalad koritaan isla markaana saamiyadooda ay ka hooseeyaan qiimaha dhabta ah. Tani waxay ka muuqataa weedho qaarkood Peter Lynch.
George Soros Xigasho
Lynch, mabda'aani wuxuu matalayaa barta laga bilaabayo maalgashi kasta. Intaa waxaa dheer, dhowr jeer ayuu ka hadlay taas, sida uu sheegay, shakhsiyan maal-galiye ayaa ka fursad fiican guul iyo lacag sameynta kan maamulaha sanduuqa. Tani waa sababta oo ah waxaad u badan tahay inaad ka hesho fursado maalgashi wanaagsan nolol maalmeedkaaga.
Sida falsafadaha kale ee maalgashiga, Peter Lynch wuxuu si joogta ah u dhaleeceeyay waxa loogu yeero waqtiga suuqa. Waxay ku saabsan tahay saadaasha la isku dayay ee ku saabsan xigashooyinka mustaqbalka. Sida laga soo xigtay isaga, "Lacag badan ayaa ka lumay isku dayga ah in la saadaaliyo sixitaanka suuqa marka loo eego saxitaanka laftiisa." In kasta oo aysan ka muuqan liistadeena ereyada ugu wanaagsan Peter Lynch, haddana shaki la’aan waa milicsiga weyn in la sameeyo.
Waxaan rajeynayaa in xigashooyinka Peter Lynch ay adiga kuu muujiyeen caawimaad iyo dhiirigelin. Waxay yihiin talo iyo milicsi wanaagsan, gaar ahaan haddii aan ku cusub nahay adduunka dhaqaalaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Peter Lynch Xigasho
Baakadaha iyo rarka: noocyada jira iyo kuwa ugu fiican